February 17, 2020 - MM Live News
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကပ်ပိယလုပျပွီး တရားလာအားထုတျနတေဲ့ ဥရောပသား…
February 17, 2020 February 17, 2020 MM Live News
ကမ္ဘာမှာ လူပေါင်းသန်းထောင်ချီနေထိုင်ကြပြီး မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်… လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ကိုးကွယ်ကြသူအများအပြားရှိရာမှအခုပြောပြမှာက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုသက်ဝင်ပြီး မြန်မာဝတ်စုံပုဆိုးကို ကြိုးစားပမ်းစားဝတ်ကာ ဆရာတော် အနားမှာ ကပ္ပိယလုပ် တရားအားထုတ်နေတဲ့ ဥရောပတိုက်သားတစ်ဦး အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပတိုက်ကနေ မြန်မာတို့ရဲ့လုံချည်ကို ကောင်းစွာဝတ်လျက် မြန်မာတွေလို ဆရာတော်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင် နေ့စဉ်ဆွမ်းခံလိုက် ဆရာတော်နှင့်အတူ တစ်ထပ်သောဆွမ်းကိုစားလျက် ဝိပဿနာကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ လာပြီးအားထုတ်နေတာဟာ မြန်မာတို့ အတုယူသင့်တယ်ဆိုရမလား ဘာလားမသိတော့ဘူး ။ ဒီဒါယကာကြီးဟာ ဘုန်းဘုန်းဥရောပရောက်တော့လည်း အီတလီမှာ တရားစခန်းလာဝင်ရင်း ဘုန်းဘုန်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါသေးတယ်။ ဘုန်းဘုန်းသုံးတဲ့ရေချိုးခန်း အိမ်သာအထိ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ်။ ဘယ်ဘဝကရေစက်တွေလည်းတော့မသိဘူးပေါ့။အခုလည်းဆွမ်းသေချာကပ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လှသော ဘာသာခြားနိုင်ငံကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုသက်ဝင်ကာ တရားတွေကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာဟာ တကယ်ကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကိုးကွယ်လာတဲ့ […]
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကပ်ပိယလုပျပွီး တရားလာအားထုတျနတေဲ့ ဥရောပသား
မိခငျမရှိတော့တဲ့ လကျလြှော့ရမဲ့အနထေားဖွဈနသေော အကူအညီလိုအပျနတေဲ့ မိနျးကလေးငယျ
ဇီဝိတဒါနpost​လေးပါ ညောင်ဦးဆေးရုံမှာကုသနေတဲ့အကူညီလိုနေတဲ့ခလေးငယ်… ခလေးကမွေးရာပါနှလုံးရောဂါ….မိခင်ကမရှိတော့ဘူး အဖေပဲရှိတယ်… ကျောက်ကားလိုက်ရတဲ့တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားပါ… အမည် မသန်းစုမွန် အသက် 12နှစ် လိပ်စာ ဖိုစုရပ် ကျောက်ပန်းတောင်း ညောင်ဦးဆေးရုံကခလေးအတွက် အခမဲ့လုက်ပေးလို့ရတဲ့ကုသမှူအားလုံးပြုလုပ်ကုသပေးနေကြပေမဲ့ …. ခလေးက အင်မတန်ဆင်းရဲလို့ အခါခါရက်ချိန်းလာရဖို့တွေနဲ့ဆေးရုံတက်နေစဉ်တွေ…. အသုံးပြုပြုကုန်ကျမှာတွေ လုံးဝမတတ်နိုင်လို့ ရက်ချိန်းကုသမှူတွေဆက်ကုဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ…. လက်လျှော့ရမဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်လို့ ညောင်ဦးဆေးရုံကလက်ရှိတာဝန်ကျနေတဲ့…. ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာမ တိုးတိုး (ယခင်မြဝတီဆေးရုံ)မှာတူန်းက ကျမနဲ့အတူ…. နွမ်းပါးလူနာများအရေးအတူ လက်တွဲကူခဲ့ကြသူက ဆက်သွယ်အကူညီတောင်းပြီး တင်ပြခိုင်းပါတယ်… ခလေးငယ်အတွက် ကူညီလှူဒါန်းချင်သူများအနေနဲ့ … ဆရာမ တိုးတိုး လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ ညောင်ဦးဆေးရုံ ဖုန်း-09799037341 သို့ နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းဆက်သွယ် ကူညီပေးကြစေချင်ပါတယ်…..။ ကူညီမည့်သူများတွေ့ရှိစေဖို့ နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်း share ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြစေချင်ပါတယ်….။Nawe Nawe unicode ဇီဝိတဒါနpostလေးပါ ညောငျဦးဆေးရုံမှာကုသနတေဲ့အကူညီလိုနတေဲ့ခလေးငယျ… ခလေးကမှေးရာပါနှလုံးရောဂါ….မိခငျကမရှိတော့ဘူး အဖပေဲရှိတယျ… ကြောကျကားလိုကျရတဲ့တဈနလေု့ပျတဈနစေ့ားပါ… […]
February ၂၉ ရကျနမှေ့ာ သဘောကတြဲ့ ယောကျြားလေးကို အမြိုးသမီးတှေ ခဈြခှငျ့ပနျနိုငျ
February ၂၉ ရက်နေ့မှာ သဘောကျတဲ့ ယောက်ျားလေးကို အမျိုးသမီးတွေ ချစ်ခွင့်ပန်နိုင် မိန်းမသားတို့ရက်ထပ်နှစ်မှာ ချစ်ခွင့်ပန်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း… ဒီနှစ် ၂၀၂၀ ဟာ (Leap Year) ရက်ထပ်နှစ် ဖြစ်တာမို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ မှာ ၂၉ ရက် ရှိတယ်။ အဲဒီ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့ မှာ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ ယောက်ျားလေး တွေကို ချစ်ခွင့်ပန် ချစ်ရေးဆိုလို့ ရပါတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးကစပြီး ကိုယ့်ချစ်သူကို (Propose) လက်ထပ် ခွင့်တောင်း လို့လည်း ရပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အဲဒီ့နေ့မှာ ချစ်ခွင့်ပန်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ထပ်ခွင့် တောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ မငြင်းဆန်ပဲ လက်ခံတတ်ကြတယ်။ တကယ်လိုိ့များ ယောက်ျားလေးဘက်က လက်မခံပဲ […]
ဆေးလိပျသောကျသူမြား၊ အာပုပျနံ့နံသူမြား၊ ခြောငျးဆိုးနသေူမြားအတှကျ အဆုတျကို သနျ့ရှငျးပေးနိုငျမယျ့ ကနျစှနျးရှကျပွုတျရညျ
အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်မယ့် ကန်စွန်းရွက်ပြုတ်ရည် ဤဟင်းချိုသည် ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ အာပုပ်နံ့နံသူများ၊ ခန္ဓာကိုယ် အပူ များနေသူများ၊ ချောင်းဆိုးနေသူများအတွက် ထိရောက်စွာ အကျိုးပြုနိုင်သည်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ကန်စွန်းရွက် (၁) Kg( အရိုးကိုပါ အသုံးပြုပါ။) ပျားရည် (၄၀၀) ဂရမ် ရေ (၄)လီတာမျှ ရေကောင်းကောင်းဆန့်သည့် အိုးကြီး (၁)အိုး ပြုလုပ်နည်း… အထက်ပါပစ္စည်းများ အားလုံးရော၍ မီးမျှင်းမျှင်းနှင့် (၄) နာရီ ကြာတည်ပါ။ အဖတ်များကို စစ်၍ ပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် (၂-၃)ရက်ထားပါ။ မိသားစု (၁)ဦးချင်း တစ်နေ့(၁)ခွက် သောက်ရပါမည်။ ကန်စွန်းရွက်ဟင်းချိုသောက်ခြင်းဖြင့် အဆုတ်အတွက် ကောင်းသည်ဟု တရုတ်လူမျိုးများက အထူးသဖြင့် ဓလေ့ရိုးရာအဖြစ် သောက်ကြသည်။ အကျိုးသက်ရောက်ပုံများမှာ… (၁) အဆုတ်အတွင်း အဆိပ်အတောက်များကို စင်ကြယ် […]
လူတဈယောကျသပွေီးပွီးခငျြး သငျကိုယျတိုငျ လှူနိုငျသော အလှူ…
လူတစ်ယောက် သေပြီးရင် ဘာတွေ လှူလို့ရလဲဆိုတာ အပြည့်အစုံ သိထားရန် လူတစ်ယောက်သေပြီးပြီးချင်း သင်ကိုယ်တိုင် လှူနိုင်သော အလှူတစ်ခု #လူတစ်ယောက်သေပြီးပြီးချင်း (1)နှလုံးက10မိနစ်အထိရှင်ပါတယ်။ (2)ဦးနှောက်ကမိနစ်20အထိရှင်တယ်။ (3)မျက်လုံးက4နာရီအထိရှင်ပါတယ်။ (4)အရေပြားကငါးရက်အထိရှင်ပါတယ်။ (5)အရိုးကရက်30အထိရှင်တယ်လို့ သိရတယ်။ သေလွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်က သုံးရက်အကြာမှာ လက်သည်းခွံတွေ ကြွေတယ်။ လေးရက်အကြာမှာ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တယ်။ ငါးရက်အကြာမှာဦးနှောက်က အရည်ပျော်တယ်။ ခြောက်ရက်အကြာမှာ အစာအိမ်က အရည်ဖြစ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ ဒွါရပေါက်ကနေ ယိုစီးတယ်။ ရက်ခြောက်ဆယ်အကြာမှာ အရိုးက ကမ္မဌာန်းရုပ်ကလွဲလို့ ဘာမှမကျန်အောင် ခြောက်သွေ့သွားတယ်။ လူတစ်ယောက်က သူသေဆုံးပြီးနောက် အလှုနှစ်ခု ထပ်မံပြုလုပ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုဒါန်းခြင်းနဲ့ မျက်ကြည်လွှာ လှူဒါန်းနိုင်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ သေဆုံးပြီးနောက်တန်ဖိုးမရှိ သုံးမရတော့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းပြီး ပြာကျခံမယ့်တူတူ အကျိုးပြုပေးနိုင်မယ့် […]
ယာဉ်မောင်းများ သတိထားပြီးမောင်းကြစေလိုပါသည်။ အန္တရာယ်ဆိုသည်မှာ မိမိအတွက်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို တပါးသူအတွက်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည် စည်းကမ်းရှိကြပါ….။ ယနေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီကျော် အချိန်ခန့်က လက်ပန်လှ စာသင်ကျောင်းအရှေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ယာဉ်တိုက်မှု့….။ (၁၇.၂.၂၀၂၀) လက်ပန်လှ နယ်မြေရဲစခန်း။စဉ့်​ကူးမြို့နယ် unicode ယာဉျမောငျးမြား သတိထားပွီးမောငျးကွစလေိုပါသညျ။ အန်တရာယျဆိုသညျမှာ မိမိအတှကျလဲ ဖွဈနိုငျသလို တပါးသူအတှကျလဲ ဖွဈနိုငျပါသညျ စညျးကမျးရှိကွပါ။ ယနေ့ နလေ့ညျ ၁၂နာရီကြျော အခြိနျခနျ့က လကျပနျလှ စာသငျကြောငျးအရှမှေ့ာ ဖွဈပှားခဲ့သော ယာဉျတိုကျမှု့။ (၁၇.၂.၂၀၂၀) လကျပနျလှ နယျမွရေဲစခနျး။စဉျ့ကူးမွို့နယျ
(၁၆)ရကျ ညနေ(၄)နာရီအခြိနျခနျ့က ညှနျကွားရေးမှုးနှဈဦးသဆေုံးသှားသော ယာဉျတိုကျမှု
လက်ပံပျား ရွာအနီးတွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ညွန်ကြားရေးမှုး နှစ်ဦးသေဆုံး 16-Feb-2020 / ဓာတ်ပုံ – နေဖုန်းမြင့် / ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၆) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် မိတ္ထီလာ -ကျောက်ပန်းတောင်းလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၃၆/၂) လက်ပံပျားကျေးရွာအနီးတွင် ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၆)ရက် ညနေ(၄)နာရီအချိန်ခန့်က ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ်နှင့် မက်ခ်တူးယာဉ်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိ၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှုး နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ မိတ္ထီလာဘက်မှ ကျောက်ပန်းတောင်းဘက်သို့ ယာဉ်မောင်းနိုင်ကြီး မောင်းနှင်လာသော “OK” EXPRESS ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှင့် ကျောက်ပန်းတောင်းဘက်မှ မိတ္ထီလာဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကျော်စွာဝင်း မောင်းနှင်လာသော အနက်ရောင် မက်တူးယာဉ်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိရာတွင် အနက်ရောင်ယာဉ်ပေါ်ပါသူ ဦးသိန်းကျော် (၅၆)နှစ် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး အောက်မြန်မာပြည်(ရန်ကုန်)နှင့် […]
တဈနာရီကို ၂၀မိုငျမှ ၃၅မိုငျ ထိ လပွေငျးမြား တိုကျခိုကျနိုငျပါသဖွငျ့ မီးဘေးသတိထားရနျ ဒသေမြား …
တစ်နာရီကို ၂၀မိုင်မှ ၃၅မိုင် ထိ လေပြင်းများ တိုက်ခိုက်နိုင်ပါသဖြင့် မီးဘေးသတိထားရန် ဒေသများ … အရမ်းအရေးကြိးလို့ အများသိအောင် အမြန်ရှယ်ပေးကြပါ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်…. ရန်ကုန်တိုင်းတွင် တစ်နာရီ ၁၅မိုင်မှ ၂၀မိုင် ပဲခူး ညောင်လေးပင် ဒိုက်ဦး ပြွန်တန်ဆာ သာယာဝတီ အုတ်ဖို ကြိုပင်ကောက် လက်ပန်တန်း ပုတီးကုန်း သဲကုန်း ဇီးကုန်း အင်းမ ရွှေတောင် ပြည် အောင်လံ သရက် မြို့များတွင် …. တစ်နာရီ ၂၀မိုင်မှ ၂၅မိုင် ဖြူး ဇေယျဝတီ အုတ်တွင်း တောင်ငူ ဆွာ ရေတာရှည် သာဂရ […]